Author Topic: Jyoti Magar (ज्योति मगर) Singer and model (Read 70444 times)
« on: April 23, 2015, 06:44:49 AM »
Hottest singer in Nepal !!
« Reply #1 on: April 23, 2015, 07:49:24 AM »
« Reply #2 on: April 23, 2015, 07:59:20 AM »
jyoti magar nipple show.jpg (69.64 kB, 640x960 - viewed 1623 times.)
« Reply #3 on: June 11, 2015, 12:35:42 PM »
« Reply #4 on: June 13, 2015, 01:23:46 PM »
« Reply #5 on: August 09, 2015, 02:48:19 PM »
ज्योती मगर भन्छिन् ‘मलाई मेरो बाबुजस्तो लोग्ने चाहिँदैन’
लोक तथा दोहोरी गायिका ज्योति मगरको चर्चा गीत भन्दा पनि उनको शरिर र उनले लाउने गरेका पहिरनबाट हुने गरेका छन्। सम्भवत: उनी जति विवादित लोकगायिका अरु कोही छैन्। लोक गायिका भएर फिल्मका हिरोइनले भन्दा पनि छोटा लुगा लगाएको भन्दै उनको आलोचना हुने गरेको छ। त्यस्तै 'गाएर' भन्दा पनि 'देखाएर' चर्चामा आउने गरेको टिप्पणी पनि उनीमाथि हुने गरेको छ। यस्ता आरोपहरुको फेहरिस्त अरु धेरै छन्। तर, स्वयमं ज्योति यी सबलाई सत्य मान्दिनन्। उनी आफ्नै 'कला' र 'गला' अगाडी बढिरहेको ठान्छिन्। उनलाई लाग्छ मान्छेले वास्तविक ज्योतिलाई चिन्नै बाँकी छ। सेतोपाटीसँगको एक साक्षात्कार उनले त्यसलाई चिर्ने प्रयास गरेकी छन्।
तपार्इंलाई अब त कसैले सोध्ने प्रश्न नै सकिए जस्तो लाग्छ?
सही कुरा गर्नु भो । पत्रकारले सोध्ने प्रश्न नै सकिएजस्तो लाग्छ । उही प्रश्न अनि उनै उत्तर, अलि झ्याउ भयो। कहिले त पत्रकारले सोध्ने प्रश्नको अनुमान नै लगाउन सकिन्छ तर, कहिले फेल हुन्छ ।
ज्योती मगरको बारेमा निकाल्नुपर्ने नयाँ कुरा छन् या थाहा भएका कुरालाई फरक कोणबाट हेर्नुपर्ने हो ?
नयाँ पनि छन् र यसैलाई फरक तरिकाले पनि हेर्न सकिन्छ ।
फरक तरिका चाहिँ कस्तो ?
अलि ‘एक्स्क्लुसिव’ र ‘पोजिटिभ’। जहिले पनि ‘एक्स्पोज’, ‘भल्गर’ का कुरा मात्र आउँछन् । केटी मान्छेको अदा राम्रो हुनैपर्छ र एउटा-एउटा अंग राम्रो हुन्छ पनि । यसैलाई सुन्दर तरिकाले लेख्न सकिन्छ नि।
स्वरको कुरा गर्दा सबैको एक किसिमको मिठो ‘टोन’ हुन्छ । ज्योती मगरको पनि आफ्नैखाले स्वर छ, त्यो कसैले कपि गर्न सक्दैन । अझै पनि मभित्र भएको प्रतिभाको खोजी भएको छैन । राम्रो मन भएको ‘गुड ह्युमन’ भन्छन् नि, त्यो पनि छ ममा । कतिलाई म हाउडे मान्छे लाग्छ होला तर, म एकदमै संवेदनशिल नारी हूँ । जे मान्छेलाई लाग्छ त्यो म हैन् । म एकदमै ‘रियालिटी’ मा बाँच्ने मान्छे हो ।
ज्योती मगरको यथार्थ के हो?
आममानिस हूँ म । एउटा हाइटमा पुगें भनेर दुधले मुख धुने कुरा आउँदैन । मलाई त्यही पोल्ने घाम चाहिन्छ । मलाई पनि भोक लाग्छ, चामल, तरकारी किन्न बजार जान्छु । प्यास लाग्छ, पानी पिउँछु ।
श्रोता र मिडियाले माया गरेर नै म यो ठाउँमा छु भन्नुहुन्छ । के साँच्चिकै माया गरेका हुन् त ?
केही हदसम्म हो । श्रोतालाई नाच्दा, हाँस्दा, रुँदा चाहिने गीत हामीले दियौं भने उहाँहरुले माया गर्नुहुन्छ । मैले त्यही दिएको भएर नै उहाँहरुले माया गर्नुभएको हो । मिडियाको कुरा गर्दा चैं कहिलेकाहीँ समाचारको ‘टाइटल’ त्यस्तै किसिमको बनाइदिँदा चित्त दुख्छ । तर, म सकारात्मक सोच राख्ने भएकाले सोच्छु, दुध दिने गाईको लात पनि सहनुपर्छ ।
आफ्ना एकदमै नीजि कुरा भन्न सक्नुहुन्छ ?
आफ्नो एकदमै नीजि कुरा त भन्न भएन नि । समय आएपछि भनिहाल्छु ।
अलिकति क्लु ?
हिहिहि...अहिले नै भन्दा त्यसको भ्यालु घट्छ । अहिलेलाई यति मात्र भन्छु, मलाई आफ्नो भोगाइमा सर्ट फिल्म बनाउन मन छ ।
तपाईंलाई सार्‍है उकुसमुकुस लागेको कुरा सुनौं न, हुन्छ ?
हाहाहा...त्यस्तो उकुसमुकुस हुने गरेरै त बसिरहेको छैन । मलाई मान्छेले जहिले पनि ‘एक्स्पोज’ गरेको भरमा ज्योती हिट भइ भन्छन् । जो मान्छेमा कला या सृजना हुँदैन त्यो मान्छे ग्ल्यामर भएको भरमै संगीत जस्तो क्षेत्रमा हिट हुँनै सक्दैन् । सरस्वतीको ‘तथास्तु’ नपाइ संगीतमा कोही पनि हिट हुँदैन ।
स्टेजमा मान्छेहरु यत्तिकै ज्योती मगरको शरिर हेर्नै आउने होइन नि। गीत सुनेर, अदा हेरेर तालि बजाउने हुन् । शरिर देखाको भरमा हिट हुने भए त जोकोहीलाई छोटा लुगा लगाएर स्टेजमा पठाए भैगो नि। मलाई ‘एक्स्पोजर’ भन्छन् तर, म आफूलाई राम्रो ‘पर्फमर’ हूँ भन्छु । मान्छेहरुले ज्योती मगर देखाको भरमा हिट भइ भन्छन् तर, मलाई त्यो कुरा गलत सावित गर्नुछ ।
आफ्नो गीत गवाई र लवाई ठ्याक्कै मिलेजस्तो लाग्छ त ?
प्रायः गीत म आफैं बनाउँछु । मेरो गीतमा वेस्टर्न फ्युजन हुन्छ, त्यसैले मिल्छ । बिमाकुमारी दुराले गाउनेजस्तो गीतमा छोटा कपडा लगाउँदा मिल्थेन । मेरोमा चैं मिल्छ ।
अरु गायिकाहरुको नाम सुन्दा स्वरको झल्को आउँछ तर, ज्योती मगर भन्ने नाम सुन्दा चैं शरिर अगाडी गायकी पछाडी भन्नेहरु छन् । तपाईंले ‘ज्योती मगर’ लाई बनाउन खोजेको त्यस्तै हो ?
एकदमै राम्रो देखियोस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ । अहिले भिडियोबिनाको गीत निकाल्नुस्, पत्तासाफ भइहाल्छ । सुन्दा कानलाई र हेर्दा आँखालाई मजा आउनुपर्‍यो । सहरिया भनाउँदाहरुले लोकगीत गाउनेहरुलाई जुन ‘लोके’ भन्छन्, उनीहरुलाई लोकगायिका सबै साडीमै हुँदैनन्, राम्रो अदा भएका पनि हुन्छन्, लोकगीत यसरी पनि पर्फम गर्न सक्छन् है भन्ने नै मैले बनाउन खोजेको हो ।
तपाईं आफूले आफैंलाई हेर्दा कसरी हेर्नुहुन्छ ?
मगर्नी हो, चिम्साचिम्सा आँखा छन् । एकदमै आकर्षक, सेक्सी त होइन । सामान्य हिसाबले हेर्दा मोटीमोटी ज्योतीभित्र पनि केही राम्रो कुरा चैं छ है भन्ने लाग्छ । शरिर मात्र हेर्दा चैं आफ्नो आँखा राम्रो लाग्छ ।
एउटा काल्पनिक प्रश्न गर्छु, तपाईंले हार्नै नसक्ने मान्छेले तपाईंको शरिर र स्वरमध्ये कुनै एउटा उपहार माग्यो भने तपाईं के दिनुहुन्छ ?
ज्योतीको स्वर र शरिर एक–अर्काका परिपुरक हुन् । शिव भगवान नै आएपनि यो दिन्छु यो दिन्न भन्ने कुरा आउँदैन । त्यसमाथि मैले हार्नै नसक्ने मान्छे आउला जस्तो लाग्दैन ।
हार्नै नसक्ने मान्छे अझै पाइएको छैन र ?
तपाईंले ‘सपनाको राजकुमार’ टाइपको कुरा गर्नुभएको होला ! राजकुमारको इन्ट्री त भइरहन्छ नि हैन ? सपनाको राजकुमार भन्ने चाहीँ छैन । प्रेम नगरेको होइन । मैले भोगाइबाट बुझेको, प्रेममा सम्झौता गर्नैपर्छ । आडभरोसा हुन्छ तर, स्वतन्त्रता हुँदैन । प्रेमको मामिलामा मेरो कमजोरी भनेको म चाँडै माफि दिने रैछु । फूलैफूलमा हनिमुन मनाउने कुरा पनि प्रेममै हुन्छन् तर, ति काल्पनिक हुन् । मैले माथि नै भनें म रियालिटीमा बाँच्छु ।
हाम्रो समाजमा अलिकति छाडाजस्तो देखियो भने यसका बाउआमा कस्ता होलान् ? भन्ने चलन छ । तपाईंका बाआमा कस्ता हुनुहुन्छ ?
खुल्लापन त अझै पनि छैन । घरमा जाँदा सबैसँग दुरी बनाएर बस्नुपर्छ । छोटा लुगा लगाउन पाइँदैन । फतरफतर बोल्न पाईंदैन । त्यति पढेलेखेको हुनुहुन्न । कतै खुम्चिएजस्तो लाग्छ । तर, त्यो बालापन, ती मान्छे र मनसँग खेल्न पाएजस्तो लाग्छ । त्यो बेला बाँच्नुको अर्को अर्थ पनि भेटिए जस्तो लाग्छ ।
परिवारबाट कस्तो शिक्षा लिनुभयो भन्न खोजेको ?
एकदमै द्वन्द भएको परिवारमा हुर्केको हूँ । बुवा एकदमै रक्सी पिउनुहुन्थ्यो । अन्य महिलाहरुसँग पनि उहाँको सम्बन्ध रहन्थ्यो । साथीका असल बाहरु देख्दा मेरा बा पनि त्यस्तै भइदिए भन्ने लाग्थ्यो । तर, त्यही कुराले नै मलाई बलियो बनाएको मान्छु । किनकी त्यस्तो अवस्थामा ममी एक्लैले परिवार सम्हाल्नुभयो । बच्चाबच्ची पढाउनुभयो । मैले ममीबाटै पाठ सिकेको हूँ । हरेक युवतीहरु आफ्नो लोग्ने आफ्नो बाउजस्तो होस् भन्ने सोच्छन् । म सोच्छु, मेरो लोग्ने मेरो बा जस्तो नहोस् । तर, मेरो बाआमालाई म माया गर्छु ।
तपाईं जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, त्यो विद्रोह हो ?
गाउँमा कार्यक्रम हुँदा नचाहेर पनि लामै कपडा लगाउनुपर्छ । लोकगायिका भएर पनि फ्युजन बनाएर लोकगीत नसुन्नेहरुलाई पनि सुनाउँ भन्ने चाहीँ मेरो विद्रोह हो । मेरो बज्यैलाई कसैले तपाईंको नातिनीले छोटो लुगा मात्र लगाउँछ भनेर कुरा लगाइदिएछ । त्यसलाई हेर्दा पनि मैले विद्रोह गरेछु जस्तो लाग्छ ।
तपाईंको फेसबुकमा कतिले तपाईंलाई ‘सन्नी लियोन’ भन्दा रैछन् । कस्तो लाग्छ ?
चित्त दुख्छ । आ–आफ्नो हेराई हो । कमेन्ट गर्नेहरु पनि नराम्रा होइनन् । त्यही कमेन्टबाट उनीहरुको लेभल थाहा हुन्छ । अर्को कुरा, जसले सन्नी लियोन हेरेको हुन्छ उनीहरुले नै सन्नी लियोन भन्ने हो । राम्रो भन्न त माधुरी दिक्षित मात्र हेरेको हुनुपर्‍यो नि। उनीहरुले एकछिनको लागि भडास निकालेको हो कि जस्तो लाग्छ । तर, अन्तिममा माया गर्ने उनीहरु नै हुन् । टिकट काटेर आउने उनीहरु नै हुन् । हाम्रोमा भन्ने एउटा हुन्छ, ‘थट’ अर्कैतिर हुन्छ ।
तपाईंलाई कस्ता कमेन्टहरु गर्दा असह्य हुन्छ ?
भन्नै नमिल्ने अश्लिल शब्द हुन्छन् । म पनि कोमल मन भएको छोरी मान्छे हो, चित्त दुखिहाल्छ । अनि त्यो भन्दा बढी अगाडी ज्योती तिमी राम्री, तिम्रो गीत राम्रो भन्ने अनि पछाडी ज्योति त यस्तो या त्यस्तो भन्दा धेरै चित्त दुख्छ ।
प्रशंसा गर्नेहरुले चाहीँ कस्तो शब्द प्रयोग गर्छन् ?
मलाई हत्तपत्त प्रशंसा नै गर्दैनन् । गरिहाले पनि ज्योती म तिम्रो शुभचिन्तक, यसो गर उसो नगर भन्ने सुझाव आउँछन् । प्रशंसा भएका ठाउँमा भने केटी मान्छे भएर पनि लोकगीतमा ‘रकिङ’ गर्‍यौ भन्छन् ।
अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी चित्त दुखेको कुनै प्रसंग छ ?
अँ, एउटा पत्रिकाले मैले अन्तरवार्ता नदिँदा नै यौन र मेरो विहे भएको भन्ने झुटो अन्तरवार्ता छापेछ । त्यसपछि संगीत क्षेत्रकै एउटा मान्छेले पछिसम्म त्यही कुराले घोचिरहे ।
अनि, एउटा नयाँ अनलाइनमा अन्तरवार्तामा मलाई सेक्सका बारेमा सोधियो । मैले १५/१६ वर्षमा पहिलोपटक सेक्स भएको बताएँ । पछि टाइटल नै ज्योतीले १६ वर्षमा सेक्सको गरेको भन्ने बन्यो । मैले आफ्नो निजि कुरा भन्न् भनेर केटी मान्छेहरु पनि अब खुल्ला हुनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले हो । कति मान्छेहरु सेक्समै कुण्ठित भएर आत्महत्या गरेका पनि छन् । त्यस्तो नहोस् भनेर म खुल्ला हुन खोजेको हूँ ।
ज्योती मगरको नीजि कुरा भन्ने बित्तिकै ‘सेक्स’ सँग नै किन जोडिएको होला त ?
त्यो मेरो गल्ती होइन । मिडियाको पनि गल्ती होइन । म एउटा उदाहरण दिन्छु, मेरो ‘पिरतीमा दम छ’ भन्ने गीतमा पाँच लाख लाख भ्यु छ, त्यही गीतको ‘सेक्सी भिडियो बाइ ज्योती मगर’ भन्नेमा तेब्बर भ्यु छ । अब भन्नुस् कसको गल्ती हो ?
तपाईंको मनमा कस्ता कुराहरु धेरै खेल्छन् ?
मैले अब कस्तो गीत बनाउने होला, पैसा मात्र डुब्ला कि, गीत हिट होला कि नहोला, कस्तो मान्छेसँग कस्तो सम्बन्ध बनाउने होला भन्ने हुन्छ । फ्ल्याट भाडामा लिएर बस्छु । महँगी बढ्दैछ । भोली फ्ल्याटबाट एउटा कोठामा खुम्चिनु पर्‍यो भने के होला भन्ने पनि चल्छ र भोली परिवार, बच्चा भएपछि मैले निभाउनुपर्ने दायित्व पुरा गर्न सक्छु कि सक्दिन होला जस्ता कुराहरु पनि दिमागमा चल्छन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २०, २०७२
« Reply #6 on: August 15, 2015, 02:18:33 PM »
रामप्रसाद खनाललाई ज्योतिको कडा प्रतिबाद
'उहाँको अभिनय भएको ब्लुफिल्म हेरेपछि म सोँचौला'
बालाजुमा तीजको गीत सुटिङ क्रममा तपाइँले कुटाइ खाएको कुरा चर्चित बनेको छ। खास भएको के हो?
खास केही भएको होइन। म त्यो दिन अर्कै काममा व्यस्त थिएँ। ११ देखि २ बजेसम्म फोटेसुटमा थिएँ। त्यपछि एटिकमा लन्च र नैकापमा तीजसम्बन्धी गीत रेकर्डिङ गर्न गएँ। साँझ घर आएर यो कुरा सुन्दा छक्क परेँ।
तीज गीत रातो सारी रातै छ कलर, एक रात सुत्न एक हजार डलर सुटिङ भएको हैन त्यसो भए?
एकदम गलत हो। प्रहरीलाई फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरुले मलाई फोन गरेर ‘ज्योतीजी यस्तो कुरा आइराछ’ भनेर सोध्नुभएको थियो। मैले केही होला। कसैले यतिकै जोक गरेको होला भन्ने जवाफ दिएँ। हिजो (बुधबार) १२ बजेसम्म नर्मल होलाजस्तो सोँचेको थिएँ। ३-४ बज्दासम्म त फोनको घन्टी बारम्बार बजेर तनाव दियो। अब यो कुरामा एक्सन पनि लिनुपर्छ जस्तो लागेको छ। मेरो भलो नचाहनेहरुले यस्तो गरेको जस्तो लाग्यो।
तपाइँका सधैँजसो यस्ता विवाद आइरहन्छन्। किन होला?
किन आउँछ मलाई नि थाहा छैन। यो कुराले म छक्क परेकी छु। तपाइँहरुलाई थाहा होला बरू।
तपाइँको प्रस्तुति शैलीले गर्दा यस्तो भएको जस्तो लाग्दैन?
त्यो भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने दर्शक स्रोताको सोचाइ र मेरो सोचाइ लगभग मिल्छ। मलाई अलिकति हट खालको गीत गाउन मन पर्छ। आफूलाई त्यसमा ढाल्न मनपर्छ। समाज बद्लिँदै गइरहेको छ। त्यो परिवर्तनसँगै गीत संगीतको शैली पनि फेरिँदै गएको हो जस्तो लाग्छ। अहिलेका दर्शक स्रोताले मन पराउने कुरामा मलाइ बढी रूचि छ। मैले सिम्पलमा पनि धेरै काम गरेको छु। सारीमा पनि गरेको छु। उहाँहरुलाई त्यो मन पर्दैन। हेरिदिनु हुन्न।
भनेपछि तपाइँ अडियन्स जे चाहन्छन् त्यही दिनुहुन्छ?
ठ्याक्कै त्यस्तो पनि होइन। म दुवै दिन्छु। एउटा संस्कृति उजागर गर्ने पनि गाइरहेकी छु। पोहोर साल नेपाली पनि एउटा मैलिक गीत गाएकी थिएँ। सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। राप्तीपारी दिनुभयो बाबाले… बोलको गीत जामानाको हो। त्यसमा मैलिक नृत्य प्रस्तुत गरेकी छु। अहिले राप्ती तर्ने जामाना छैन। पुल छ, गाडीहरु छ, प्लेन छ, धेरै कुरा फेरिइसक्यो। पौराणिक कुरालाई मैले छोडेकी छैन। म पनि युवा हो। मलाई के मन पर्छ, उमेरअनुसार मेरो पनि त आफ्नो छनैट हुन्छ नि। त्योअनुसार मेरो प्रस्तुति हुनेगर्छ।
एकथरि मान्छेहरू तपाइँले छोटो र भडि्कला लुगामा तीज गीत प्रस्तुत गरेको, तीज संस्कृति बिगारेको आरोप लगाइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालबाट महिलाहरुले नै तपाइँका प्रस्तुतिको बिरोध गरिरहेका छन्। के भन्नुहुन्छ?
तीज संस्कृति बिग्रेको हो भने त्यसमा ज्योती मगर मात्र जिम्मेवार छैन। ‘जामा छोटो भायो’ भन्ने गीतको भिडियोमा छोटो जामा लगाएँ। कोमल दिदीले डिस्कोमा तीज भनेर त्यहीअनुसार भिडियो बनाउनुभयो। कोमल दिदीले नै बुहारी सर्टपाइन्ट लाउन थालेछौ भनेर भिडियो गर्नुभयो। त्यो पनि हाम्रो कल्चर होइन। अर्को झरना थापा दिदीले पनि सर्टपाइन्टमा नाच्नुभएको छ। यो युवा पुस्ताको चाहना हो। समयको माग हो। लोक गीत तीज गीत भनेको के त? मान्छेहरुले सुन्ने गीत। लोकले सुन्ने गीत। मान्छे नै परिवर्तन भएपछि गीतसंगीत नफेरिने भन्ने कुरै हुँदैन।
तपाइँका गीत हेरेर तपाइँलाई गाली गर्नेहरू थुप्रै छन्। उहाँहरूलाई किन त्यस्तो गर्नु परेको होला?
हेर्नु पनि हुन्छ। पचाउन गाह्रो भयो पनि भन्नुहुन्छ। गाली पनि गर्नुहुन्छ। एउटै व्यक्तिले २० पटकसम्म क्लिक गरेर मेरो भिडियो हेरेकोसम्म मैले पाएकी छु। पचाउन नसक्ने मान्छेले एकचोटी हेरेर त्यसलाइ ‘ब्यान्ड’ गर्नुपर्ने होइन? किन हेर्नुहुन्छ? त्यो राम्रो लागेरै हेर्नुभएको हो नि। हेर्ने मज्जा लिने। गाली गर्ने माया गर्ने यी यावत कुराहरू चलिरहन्छन्। सामान्य हो। मेरो प्रशंसक पनि देश विदेशमा थुप्रै छन्। उहाँहरुले यस्तो कमेन्ट गर्नुहुन्न। अहिले पनि म्यासेज गरेर ‘किप इट अप तपाइँ लागिरहनुस्’ भन्नेहरू धेरै छन्। म मेरा फ्यानहरुलाई सम्मान गर्छु। उहाँहरुको मायाले नै म यहाँ छु। वास्तविकता के हो भने गाली मात्रै पाएकी थिएँ भने ज्योति मगर अहिले यो ठाउँमा हुने नै थिइनँ।
गाउँमा अझै पनि लोक गीताको प्रभाव बुलन्द छ। सहरिया भएर लोकगीत गाउन खोज्दा यस्तो भएको त होइन?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। म गाउँगाउँ पनि गएकी छु। नेपालको ५०-६० जिल्ला पुगेकी छु। प्रत्येक गाउँ गएर सुन्नुस् त्यहाँ सोलो गीत हराउँदै गएको छ। यो कुरा म आफैंले पनि अनुसन्धान गरेकी छु। मलाई पनि लाग्थ्यो मैले गलत त गरिरहेको छैन। गाउँले युवाको सोच, विचार मैले बुझेकी छु। म अहिले पनि सेलिब्रेटी नभएर एक आम ज्योती मगर भएको ठान्छु। गाउँको पूजाहरूमा गएर हेर्नोस त्यहाँ सोलो गीतमा नाचिदो रहेछ वा हिन्दी गीतमा नाचिने रहेछ। मैले पाएँ त्यहाँ नेपाली आइटमहरु लाउँछन्, उध्रेको चोली, उही मुलाको चाना, जीम्बल बाउकी छोरीमा नाच्छन्। समाज त्यतातिर गइरहेको छ।
अमेरिकाबासी तपाइँकै क्षेत्रका एकजना अग्रज रामप्रसाद खनालले ज्योतीले यस्तो गीतमा नाच्नुभन्दा ब्लु फिल्म खेल्दा राम्रो हुने टिप्पणी गरेका छन्। उहाँलाइ के भन्नुहुन्छ?
उहाँ मेरो अग्रह हुनुहुन्छ। म उहाँको छोरीको उमेरकी हुँला। उहाँको कुराले उहाँको लेभल स्पष्ट हुन्छ। उहाँको सोचाइ छर्लंग हुन्छ। उहाँले के हेर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ। ब्लु फिल्मबारे मलाई थाहा छैन, अहिलेसम्म हेरेको छैन। मैले डान्सिङ नम्बर हेरेकी छु। आइटम नम्बर हेरेकी छु। लोकमा फ्युजन दिएको हेरेकी छु। मलाई यी कुराहरुमा रूचि हो। यिनैबारे थाहा छ। र मेरो समग्र काम नै यिनै कुराको वरिपरि घुमिरहेको छ। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु- ब्लुफिल्म भनेको के हो? मेरो विनम्र अग्रह छ पहिला ब्लु फिल्म बनाएर मलाई देखाइदिनुस्। उहाँको अभिनय भएको ब्लुफिल्म म हेर्नेछु। त्यसपछि म सोँचौला।
तपाइँ त आदर्श समाज मानिने रोल्पाको मान्छे। तपाइँको विचारधारा त गाउँभन्दा विल्कुल फरक छ। गाउँ जाँदा के भन्छन् गाउँलेहरु?
तपाइँले भने जस्तो म गाउँभन्दा कता हो कता अपोजिट छैन। मैले त्यही समाज फलो गर्छु। मैले चौबन्दी चोली, मायासँग लगायतका गीत गरेकी छु। मलाइ नचिन्नु मेरो दोष हैन म अलिकति कन्जरभेटिभ छु। तपाइँले भनेजस्तो त्यहाँको समाज त्यहाँ केही हदसम्म छ। अशिक्षाका कारण रूढिगत कुराहरू बाँकी भए जस्तो लाग्छ। समाज र देशको परिवेशभन्दा टाढा म छैन। फेरि म रोल्पाको मात्र पनि होइन। म नेपाली हुँ, नेपालकी छोरी हुँ।
एकथरि लोक गीतमा परिवर्तन गर्न चाहँदैनन्। जोखिम ठान्छन्। तपाइँ लोकगीतको पृष्ठभूमिबाट आउनु भयो। हिट हुनलाइ हो त्यसका धेरै शैली फेरिदिनुभयो?
एक बेला मलाइ विष्णु माझीजस्तै गीत गाउन मन थियो। दुइटा एल्बम निकाल्दासम्म मेरो भोकल राम्रो हुँदैन भनेर विष्णु माझीहरुलाई राखेर काम गरेँ। पछि आएर कस्तो फिल भयो कि म त गायिका हो। मैले गीत गाउनुपर्छ। मेरो नशा नशामा म्युजिक छ। म गीत सँगै सुत्छु, गीत सँगै उठ्छु। मैले यसमा केही बदल्न खोजेँ। त्यही भएर उही मुलाको चानामा मैले परिवर्तन नै गरेकी हुँ। मैले धेरै दुःख पनि गरेकी छु। एउटी नेपाली चेलीले गरेको संघर्षमा त्यो गीतले नयाँ मोड ल्याइदियो। न्यौपाने नयाँ कम्पनीले रिलिज गरेको त्यो गीत हिट भयो। मैले त्यही ट्रेन्डलाइ फलो गरेँ। दर्शक र स्रोता जुन ट्रेन्डलाइ मन पराउँछन् त्यसलाइ समात्नु मेरो अपराध हैन। फेरि अहिले गाइने लोक गीत कुनै टिपिकल होइनन्। मैले त्यही म्युजिकलाई, त्यही बाजालाई, त्यही इन्स्ट्रमेन्टलाई डान्सिङ नम्बरमा रुपान्तरण गरेकी हुँ। धेरैले स्लो नम्बरमा गर्नुभएको छ। फरक त्यतिमात्र हो।
धेरैले तपाइँका भिडियोहरु घरमा बाआमासँगै बसेर हेर्न नसिकने भड्किला छन् भन्छन्। तपाइँका पछिल्ला भिडियोहरुमा अलि बढी भए जस्तो लाग्दैन?
मलाइ बढी भए जस्तो लागेको छैन। मैले मेरा बाआमा सँगै मेरो भिडियोहरु हेरेकी छु। अर्को कुरा भनेको हेर्ने जमाना पनि बद्लिँदै गएको छ। टिभीमा हेर्न छोडेर कम्प्युटर र मोबाइलमा भिडियो हेर्नैहरू बढ्दै गएका छन्। मोबाइलमा कुन परिवारले सँगै भिडियो हेर्छ? साँच्नै भन्ने हो भने त्यहाँ मान्छे एक्लै हेरिरहेको हुन्छ। त्यसैले परिवारसँगै हेर्न सक्नुभएन भने एक्लै हेर्नुहोस्, मोबाइलबाट हेर्नोस्।
तपाइँले मेरा राम्रा कुरा मात्र देखाएकी हुँ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो भन्ने पनि सुनियो…
त्यो त कला हो। (हा…हा…हा…) मैले जति थाइ सबैले देखाउँछन् भलै मेरो अलिकति राम्रो होला। यो सामान्य कुरा हो। लगाउन मिल्ने जति नै कपडा मैले पनि लगाउने गरेकी छु। मैले देखाउने चिजहरु देखाउने सम्मको नै हो। मेरो अलिकति राम्रो भएर मान्छेहरुलाई देखायो भन्ने पनि लाग्या होला। म पनि आम मान्छे हुँ। युवा मन हो रहर लागेका कुरा लगाउन मन लाग्छ। भिडियो हेरे थाहा भइहाल्छ मैले कति देखाउँछु वा देखाउँदिन भनेर। कुरा के मात्रै हो भने छोरीलाई मिनिस्कर्ट किनिदिएर मैले स्कर्ट लगाएको बिरोध गर्नु भएन।
तपाइँलाई अफ्नो सौन्दर्यमा निकै अत्मविश्वास छ है…?
शारीरिक सौन्दर्यभन्दा पनि मेरो मन सुन्दर छ। मेरो विचारहरु सुन्दर छन्। यो मामिलमा म कन्फिडेन्स छु। सुन्दरता मान्छेहरुको दुस्मन पनि हो। यसले धेरै गडबडी पनि निम्त्याउँछ। म भन्दिन म राम्री छु तर मेरो फिलिङ स्ट्रोङ छ। त्यसैलाई म सुन्दर मान्छु ।
« Reply #7 on: August 15, 2015, 02:19:36 PM »
आरोप लगाउनेलाई ज्योति मगरको जवाफ- जो आदर्शका कुरा गर्छन्, सबभन्दा ढोँगी तिनै हुन्
पहिलोपोस्ट - | 12th August 2015 | २७ साउन २०७२
‘ढाडे बिरालो…’ बोलको तीजको गीतमा गरेको अभिनयका कारण लोक गायिका ज्योति मगर यतिबेला चर्चामा छिन्, भलै उनको चर्चामा नकारात्मकता ज्यादा छ। बुधबार सामाजिक सञ्जालमा एउटा हल्ला चल्यो- एउटा गीतको सुटिङका क्रममा कुटिइन्। त्यसैका बारेमा कुरा गर्न पहिलोपोस्टले ज्योतिलाई भेटेको थियो। पहिलोपोस्टसँग कुराकानी भैरहँदा कयौँपटक ज्योतिको फोन आयो। जजसले फोन गर्थे, सबैको चासो हुन्थ्यो- तिमी ठिक छौँ? ज्योतिको जबाफ हुन्थ्यो- ‘म एकदम ठिक छु।’ उनी आफूलाई केही नभएको प्रष्टीकरण दिइरहेकी थिइन्। ‘म त हैरान भैसकेँ, साइबर क्राइम अन्तर्गत मुद्दा हाल्नुपर्ला जस्तो भयो’, उनी भन्दै थिइन्।
रोल्पाको नुवागाउँमा जन्मेकी ज्योति मगर स्कुले जीवनदेखि नै गायन क्षेत्रमा आकर्षित भइन्। रोल्पाबाट प्राथमिक शिक्षा र दाङबाट माध्यमिक शिक्षा गरेपछि उनी उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं आइन्। बच्चैदेखि गीत गाउने ज्यतिले स्कुले विद्यार्थी छँदा नै राष्ट्रिय स्तरका पुरस्कार जितिसकेकी थिइन्। व्यवसायिक गायन यात्रा भने उनले ६२/६३ सालपछि सुरु गरेकी हुन्। ग्ल्यामर दुनियाको विवाद र बहसको केन्द्रमा रहने ज्योति गीतमात्र गाउँदिनन्, लेखन, अभिनय र रेडियो नाटकमा पनि उत्तिकै जमेकी छन्। उनले मगर भाषाको फिल्ममा पनि अभिनय गरेकी छन्। पछिल्लो समय उनका बारेमा भैरहेको आलोचना र आसपासका विषयमा उनीसँग पहिलोपोस्टका रविराज बरालले गरेको कुराकानीः
भिडियो सुटिङका क्रममा तपाईँलाई बालाजुका स्थानीय महिलाले कुटपिट गरे रे नि हो? आज दिनभर सोसल मिडियामा, खासगरी ट्विटरमा, तपाईँकै चर्चा थियो।
पहिलो त यो गलत कुरा हो। दोश्रो कुरा, जजसले सामाजिक सञ्जालबाट प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, उहाँहरुको ‘लेभल’ के हो? हुँदै नभएको कुराको पछि लाग्ने काम भएको छ। मलाई साथीहरुले सुनाइरहेका छन्- उक्त गलत कुरा भाइरल भैरहेको छ रे। म त बिहानैदेखि घरमा छु। हिजो दिनभर पनि म फोटो सुटमा थिएँ किनभने नयाँ कम्पनीसँग मेरो कन्ट्र्याक्ट भएको छ। आज बिहान उठ्नेबित्तिकै म यही कुरा सुनिरहेको छु। वास्तविक कुरा नबुझी समाचार साइट वा सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने हिम्मत कसरी गर्नुभयो? सुनेका भरमा बोल्नु हुन्छ?
तपाईँ कुटिएको कुरा सत्य होइन उसोभए?
यो एकदम गलत कुरा हो। यो विषयमा म बोल्न नचाहँदा नचाहँदै पनि मैले खण्डन गर्नुपर्ने भएको छ। म यो विषयलाई लिएर साइबर क्राइम अन्तर्गत पनि जानसक्छु। म साथीभाइसँग सरसल्लाह गर्दैछु।
ढाडे बिरालो बोलकी गीतमा रहेछ- ‘यो गर्दा नि पिरलो, ऊ गर्दा नि पिरलो।’ तपाईँलाई पनि पिरलै रहेछ है? तपाईँमाथि त छाडा भएको आरोप लगाइरहेका छन् नि मान्छेहरु?
छाडाको मापदण्ड के हो? सबै मान्छेलाई सबै कुरा मनपर्छ भन्ने छैन। मन नपरेको कुरा नहेर्दा हुन्छ। मन पराउन र नपराउन सबैलाई छुट छ। यो आलोचित हुनुपर्ने गीत नै होइन। ल ठिकै छ यसका बारेमा आलोचना नै गर्नुपर्छ रे, म त्यो गीतमा खेल्ने मोडलमात्र हो। म सर्जक, लेखक, गायक वा डाइरेक्टर होइन। गीत सेन्समा छ, तर गीतको अर्थ नै नबुझ्नेहरुले ‘ननसेन्स’ कुरा गरिरहेका छन्, किनकि उहाँहरुको ‘लेभल’ नै त्यही हो।
तर तपाईँको पोसाक र हाउभाउ भड्किलो भएको त हो नि?
त्यस्तो होइन। समाज बदलिएको छ। समाज खुला संस्कृति चाहिरहेको छ तर केही मान्छेको सोंच बदलिएको छैन। ज्योतिले के राम्रो गर्‍यो भन्दा पनि के नराम्रो गर्‍यो भनेर खोज्ने मान्छेहरु छन्। जो मेरो राम्रो चाहनुहुन्न, उहाँहरुले संस्कार र संस्कृतिको आड लिएर गलत चलखेलमात्र गर्नुभएको हो। जो आदर्शको कुरा गर्छन्, तिनै मान्छे समाजका सबैभन्दा खराब मान्छे हुन्, सबैभन्दा ढोंगी मान्छे तिनै हुन्। अहिले ६ लाख भन्दा बढीले यो भिडियो हेर्नुभएको छ। मन पराएर त हेर्नुभयो होला त।
तपाईँले यसो भनिरहँदा दुई अर्थी लाग्नेखालका शब्द गीतमा हुन्छन्। एकहदसम्म त समाजले आलोचना गर्नु ठिकै होइन र?
हेर्नुस्, हरेक कुरा दुई अर्थी हुन्छ। मान्छेलाई फूलजस्तो, जूनजस्तो भन्छौँ हामी। के त्यो फूलजस्तै हुन्छ त? जून जस्तै हुन्छ त? म त हरेक कुरा अनेकअर्थी, बहुअर्थी देख्छु। त्यो दृष्टिकोणको कुरा हो। छाडाको मापदण्ड के हो? यो त मान्छेको सोंच र दृष्टिकोणले फरक पार्ने कुरा हो। कलालाई कसरी लिने, कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा हो। फूलको आखामा फूलै संसार, काडाको आखामा काडै संसार। तपाईँको दृष्टि के हो, त्यसमा भर पर्छ।
लोक गायक रामप्रसाद खनालले ‘हिट हुने भूत चढेको हो भने ब्लु फिल्म खेल्दा चर्चित हुन झन् छिटो होला, बरु त्यतै लाग्छेउ कि नानी’ भनेर फेसबुकमार्फत तपाईँलाई सुझाव दिनुभएछ नि। तपाईँको जवाफ के छ?
उमेरका हिसाबले म उहाँको छोरीजस्तो मान्छे हो। छोरीजस्तो मान्छेलाई ‘ब्लु फिल्म’ खेल भनेर सुझाव दिनेको औकात के हो भन्ने कुरा हो। जहाँसम्म खेल्ने कुरा रह्यो- ब्लु फिल्मका बारेमा उहाँलाई थाहा रहेछ, बनाउनुस्, खेल्नुस्, त्यो फिल्ममा आफ्नी छोरीलाई पनि खेलाउनुस्, अनि म पनि खेलुँला।
तपाईँका बारेमा आएका समाचार पढ्दा मिडियामा तपाईँलाई एउटा ‘बोल्ड’ कलाकारका रुपमा पनि प्रस्तुत गरिँदो हरेछ। तपाईँलाई चाहिँ आफू कस्तो मान्छे लाग्छ?
म पनि एउटा मान्छे हो। म भित्र पनि भावना छन्। म बोल्ड पनि छु, गोल्ड पनि छु। परिस्थितिअनुसार बग्न सक्छु, वातावरणअनुसार रम्न र रमाउन सक्ने क्षमता छ। यहाँ ग्ल्यामरलाई बोल्ड भन्ने चलन छ। बोल्ड भनेको त जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा संघर्ष गरेर अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता हो। त्यसअर्थमा भन्नुहुन्छ भने म बोल्ड नै छु।
तपाईँका पछिल्ला गीत, अभिनयमा तपाईँको हाउभाउ र भेषभुषाले गर्दा संस्कृति दुषित पारेको आरोप छ। सुरुदेखि नै तपाईँका गीत यस्तै हुन् र?
लोकसंस्कृतिमा विकृति भित्र्याएको आरोप जसजसले लगाउँछन्, उनीहरुले राम्रो कुरालाई कहिल्यै पनि ‘एप्रिसियट’ गर्न सकेनन्। राम्रो कुरालाई ‘एप्रिसिएट गर्ने भए त उहाँहरु ढाडे बिरालोजस्तो गीतमात्रै त हेर्नुहुँदैनथ्यो नि। उहाँहरुले मेरो ‘उही मुलाको चाना’ हेर्नुहुन्थ्यो, ‘मायासँग’ भन्ने एल्बम हेर्नुहुन्थ्यो। उही मुलाको चानाले मलाई ज्योति मगर बनाएको हो। जसले अहिले ‘ढाडे बिरालो’ को आलोचना गर्नुभएको छ, उहाँहरुले हिजो ‘उही मुलाको चाना’ लाई ‘एप्रिसिएट’ गर्नुभयो त? यो भन्दा अघिको तीजको गीत ‘टिपन सकिन खाइन बरिलै’ मेरा आमाहरुको पालमा गाउने गीत हो। त्यसरी नै गाएको छु, भेषभुषा पनि परम्परागत नै छन्। खै त त्यसको चर्चा गरेको? अपेक्षा चाहिँ ढाडे बिरालोको गर्ने, अनि गाली पनि गर्ने? एकपटक सोच्नुपर्‍यो- उहाँहरुले आफूलाई गाली गर्‍या कि मलाई ?
फेरि पनि तपाईँ प्रायः किन छोटा लुगामा नै अभिनय गर्नुहुन्छ?
मेरो ड्रेसको बारेमा यहाँ खुब कुरा उठ्छ। मेरो गीतहरु अलि ‘स्पाइसी’ छन्। मैले गुन्युचोली लगाएर ‘पिरतीमा दम छ’, ‘उही मुलाको चाना’ गाएँ भने सुहाउला त? अथवा मैले स्कर्ट वा वनपिस लगाएर ‘रुँदैरुँदै जान्छु मेला’ भन्ने गीत गाउँदा पनि सुहाउँदैन होला। त्यो तालमेलको कुरा हो, प्रस्तुतिको कुरा हो। नमिल्दो कुरा गर्‍यो भने त दर्शक/स्रोताले रुचाउँदैनन् नि।
लोकगीतमा विकृति आयो, यसको मौलिकता हरायो भन्ने कुरा त केही वर्षदेखि उठि नै रहेको छ नि। हैन र?
मौलिकता भनेको के? लोकगीत ‘टिपिकल’ भएन भनेर गुनासो गर्नेहरुलाई मेरो प्रश्न छ- टिपिकल लोकगीत भनेको कस्तो हो? मलाई देखाइदिनुस् न। अहिले रेकर्ड हुने कुनै पनि गीत टिपिकल होइनन्। टिपिकल लोकगीत हुन त टिपिकल मेलोडी र बाजा चाहियो। सारंगी, बासुरी, मादल, खैजडीमात्र प्रयोग हुनुपर्‍यो। यदि टिपिकल नै बनाउने हो भने कम्प्युटर प्रयोग नै गर्नुभएन। मेरो आफ्नो शैली छ। सबैको आआफ्नो शैली छ। समाजसँगै परिमार्जन र परिवर्तन हुँदै जानु नै लोकगीत हो। आजभन्दा भोलि यो फेरिन्छ। यो बुझ्नुपर्‍यो।
एकातिर तपाईँको आलोचना बढेको छ त अर्कोतिर तपाईँको व्यस्तता। कार्यक्रमहरु लिएर विदेश पनि गैरहनुहुन्छ। विकृति भित्र्याएको भए त बजारले तपाईँलाई नरुचाउनुपर्ने। तपाईँको आलोचना र मागबीचको सम्बन्ध के हो?
(लामो हाँसो) यी दुईबीच त्यस्तो सम्बन्ध छैन। म कार्यक्रम लिएर घुमिरहन्छु। एकथरी मेरा समर्थक हुनुहुन्छ- सर्जक अनि स्रोता। उहाँहरु मेरो माग गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ। आलोचनाले त्यसलाई कुनै असर नै गर्दैन। अर्का छन्, आलोचक। उनीहरु पनि भित्र कतै मलाई माया नै गर्छन्। तर कतिपयले मलाई नराम्रो नै भन्छन्। तर नराम्रो भन्नेहरुको पनि के भयो भने- उहाँहरुको ‘थिंकिङ प्यार्टन’ एउटा छ, भित्री चाहना अर्को छ। सोच्नुहुन्छ एकथोक, बोल्नुहुन्छ अर्कोथोक। बाहिर खोक्रो आडम्बर र ढोंग देखाउने चलन छ। यो ठिक होइन।
यो अन्तिम प्रश्न हो। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ?
तीजका अवसरमा मेरो आफ्नै पनि गीत आउँदैछ। अहिले चर्चा वा आलोचना भैरहेको ‘ढाडे बिरालो’ मा मैले अभिनयमात्र गरेको हो, यो मेरो आफ्नै गीत होइन।
अर्को कुरा, एउटालाई गाली गर्ने बहानामा हामी कतिसम्म गिर्न सक्छौँ भनेर मूल्यांकन गरौँ। सामाजिक सञ्जालमा मलाई गाली गर्नेहरुलाई मेरो आग्रह छ- मलाई गाली गर्ने नाममा तपाईँ आफै असभ्य त बन्नुभएको छैन? गीतको भाव नै नबुझी एकोहोरो गाली त गर्नुभएको छैन? आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नुहोस्, अनि मलाई गाली गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा जसले मेरो राम्रो कुराको ‘एप्रिसियट’ गर्दैन, उसलाई गाली गर्ने अधिकार पनि छैन। गाली गर्ने अधिकार त्यसलाई छ, जसले मेरो राम्रो कुरालाई ‘एप्रिसिएट’ गर्छ। हैन भने सुनेका भरमा लहैलहैमा लागेर गाली गर्नु भनेको बालुवामा पानी खन्याएजस्तै हो।
« Reply #8 on: August 15, 2015, 02:23:44 PM »
« Reply #9 on: August 17, 2015, 12:04:03 PM »